Adora Suites-Ilha Grande-4 - I-Airbnb
Adora Suites-Ilha Grande-4
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJaqueline
UJaqueline ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Uya kuba nendlu yakho yonke. Ifumaneka e-Abraao, e-Ilha Grande kwaye yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba ukuya elunxwemeni. Indlu inegumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela. Isiqithi siyingqayizivele kakhulu, kufuneka sityelele
4.52 out of 5 stars from 235 reviews
4.52 · Izimvo eziyi-235
Ilali yase-Abraao yeyona ndawo iphambili yokhenketho e-Ilha Grande. Kukho ukhenketho oluninzi lweenqanawa mihla le ukuya kundwendwela ezinye zeelwandle ezingama-106 kwiSiqithi. Zininzi iindawo zokutyela zasekhaya apho unokufumana ukutya okumangalisayo kunye neziselo kanye elunxwemeni. Ukuba unomdla kakhulu kukho iindawo ezininzi onokukhwela kuzo okanye ibhayisekile ukuya ezinje ngamadama endalo, iingxangxasi, iincopho, iindawo zembali njalo njalo. Sibuze malunga nokhenketho, singakunceda.
Izimvo eziyi-1 397
Ndisebenze iminyaka emininzi njengomkhenkethisi esiqithini.
Siza kuphendula imibuzo yakho kwaye sikunike iingcebiso malunga nokuba ungakonwabela njani ukuhlala kwakho eS…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vila do Abraão